नेपालटार दुर्घटना अपडेट– एसपी : पास छ, सिडियो : पास छैन् - Nagarik Bahas
नेपालटार दुर्घटना अपडेट– एसपी : पास छ, सिडियो : पास छैन्
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ समय: १४:४६:५५
उदयपुर । नेकपा एमालेका युवा नेताले चलाएको गाडीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमतीपत्र पास नलिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । एमालेका नेता भागवत राउतले चलाएको गाडी उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ स्थित नेपालटारमा बुधबार साँझ ६ः४० बजे मोटर साइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।
राउतले हाकेको बा.१२ च ९८६२ नम्बरको कारले विपरित दिसाबाट आउँदै गरेको स. १० प २७२ नम्बरको मोटर साइकललाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको कारमा प्रेस लेखेर टासेर नभई सवारी पास रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपी भिमबहादुर दाहालले जानकारी दिए । एसपी दाहालले भने, ‘जिल्लामा ल्याएको गाडीमा प्रेस लेखेको छैन् तर सवारी पास छ ।’
राउतको कारमा केही दिनदेखि नै प्रेस लेखेर चलाई रहेको रहस्य समेत खुलेको छ । राउतको कारमा प्रेस लेखेर चलाई रहेको मैले पनि देखेको सिआइवीका घुमुवाले पनि पुष्टी गरेको छ । उनले भने, ‘बुधबार विहानसम्म गाईघाटमा त्यही कारमा प्रेस लेखेको मैले देखेको थिए ।’ यस्तै एक पत्रकारका अनुसार भागवत राउत चढेको कारमा मैले पनि प्रेस लेखेको देखेको जानकारी दिए ।
राउतको कारले सवारी पास लिए नलिएको बारेमा बुझनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा सम्पर्क गर्दा बुधबार अफिस टाइमसम्म बा.१२ च ९८६२ नम्बरको सवारी साधनले सवारी पास अनुमतिपत्र नलिइएको पाइएको छ । प्रशासन कार्यालयको दुई वटा सवारी पासको चलानी कितावमा उक्त गाडीको अनुमतीपत्र जारी भएको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी राम सेढाईले दुर्घटना गराउने बा. १२ च ९८६२ नम्बरको कारले पास नलिइएको बताए । ‘पास लिएको नलिएको भन्दा पनि केस दुर्घटनाको भएकाले घाईतेको उपचार गर्ने कार्य भईरहेको छ ।’ सेडाईले भने ‘प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, लापरवाही गरेको ठहरे कार्वाही हुन्छ ।’
निषेधज्ञा उलंघन गर्नेलाई कारबाही के हुने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जेष्ठ १३ र २० गते जारी गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धीको आदेशमा निषेधित कार्यहरु अर्थात गर्न नहुने कार्यहरुको (ख) को १ नं. बुद्धामा सवारी साधन तथा निजी यात्रु बाहक सवारी साधन संचालन गर्न नपाईने लेखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जारी गरेको आदेशको उलंघन गरेमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ बमोजिम व्यक्तिलाई रु. १ लाख सम्म जरिवाना र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई पटकै पिच्छै रु. ५ हजार जरिवाना तोकिएको छ । पास नभएपछि निषेधज्ञा उलंघन गरेवापत जरिवाना हुन्छ वाहुँदैन हेर्न बाँकी रहेको छ ।
प्रेसको दुरुपयोग दण्डनिय
नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश सदस्य यमन कुमार दनुवारले गैर पत्रकारले प्रेस लेखेर सवारी चलाएको कुरा पत्रकार पेशा प्रति घुसपैठ भएको बताए । उनले भने ‘गैर पत्रकारले प्रेसको दुरुपयोग गरेको भए जो व्यक्ति भए पनि कार्वाहीको भागिदार हुनु पर्ने हो, महासंघ जिल्ला शाखालाई यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
घाइतेको अप्रेशन गर्नु पर्ने
उदयपुरको नेपालटारमा बा.१२ च ९८६२ नम्बरको कारको ठक्करबाट स.१० प २७२ नम्बरका मोटर साइकल चालक र पछाडी सवार दुवै घाइते भएका थिए । घाइते हुनेमा तस बहादुर राई र अमृत तामाङ्गको न्यूरो हस्पिटल विराटनगरमा उपचार भईरहेको छ ।
घाइते भएका दुवै जनालाई आइसियुबाट अहिले जनरल बेडमा सिफ्ट गरिएको अस्पतालमा रहेका घाइतेका कुरुवा राजकुमार राईले जानकारी दिए । ‘घाइते तस बहादुर राईको मुखको देव्रे साइड रहेको दात अड्याउने च्यापु हड्डी भाचिएको छ , दातहरु हलिएको छ । डाक्टरले अप्रेशन गरेर स्टिल लगाउनु पर्छ भनेको छ ।’ कुरुवा राईले भने, ‘अर्का घाइते अमृत तामाङको टाउकोमा एक इन्च भन्दा बढी गहिरो चोट छ । हड्डी दविएको छ । उसको पनि अप्रेसन गर्नु पर्ने भनेको छ ।’
नेताले मानवीय सम्वेदनशीलता पनि गुमाउनु भयो
नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी सदस्य तथा मदन भण्डारी आँखा अस्पताल उदयपुरका अध्यक्ष समेत रहेका भागवत राउतले मानवीय सम्वेदनशीलता पनि गुमाएको गुनासो घाइतेका आफ्न्त नारायण राईले बताए । उनका अनुसार गल्ती जो कोहीबाट पनि हुन सक्छ तर, कारले ठक्कर दिईसकेपछि रोकेर उपचार गराउन लैजानु पर्नेमा उल्टै भागेर जानु भयो । ‘प्रेस लेखेको कार नै मोटर साईकललाई ठक्कर दिएर हुईकिए पछि कहाँको मानवीय सम्वेदनशीलता हो’ उनले बताए ।
रोक रोक भन्दा पनि नरोपछि तीन जना युवाहरु कारको पिछा लागेर कारको नम्बर प्रहरीलाई टिपाई दिइएको थियो । कारको नम्बर प्रहरीलाई टिपाई दिएर ती युवाहरु इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी सम्म नै पुगेका थिए ।
कत्तै कसैले नदेखेको भए रक्तश्रावले घाइतेहरुको घटना स्थलमै मृत्यु पनिहुन सक्थ्यो । तर, धन्न देख्नेहरु थिए र चाँडै एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल पुर्याए ।
स्थानीय प्रदिप बस्नेतका अनुसार हामीले नै घाइतेलाई उद्धार गरेर एम्बुलेन्स बोलाएर विरामीलाई जिल्ला अस्पतालसम्म पुर्याएको हुँ । उनले भने, ‘ठक्कर दिने चालकले घाइतेको अवस्था कस्तो छ, हेर्नुको साट्टो जानु भयो ।’
उदयपुरको गाईघाट बसपार्कबाट पेस्तोलसहित तीन जना पक्राउ
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ बसपार्कबाट एक थान पेस्तोलसहित तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रण...
गाईघाटका व्यवसायीहरुको चेतावनी : खोप लगाउन नपाए खाद्यन्न पसल समेत बन्द गर्ने
उदयपुर । उदयपुरमा लक्षित वर्गको लागि आएको कोरोना विरुद्धको खोप पहुँचबालाहरुले लगाएपछि यसकै चर्चा गाईघाटमा मात्रै नभएर जि...
उदयपुरगढी । ‘हाम्रो गाउँमा बौलाहा कुकुरले सखाप बनायो, सात जना मानिस र ४० वटा पशु चौपायालाई टोक्यो, घाईते मानिसलाई कटारी ...
उदयपुर । बेलका नगरपालिका ३ स्थित १७६ दशमलव २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गर्नु वडाको तर...
कटारी नगरपालिकालाई गोर्खा वेल्फेयरद्वारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिकालाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गोर्खा वेल्फेयर सोसाइटीले स्वास्थ्य सामग्र...